မင်္ဂလာပါ.. အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကျ အနုသုခုမ အညွှန်းကဏ္ဍကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ဘဝအမောတွေ ပြေစေမယ့် အနုသုခုမ လက်ရာလေးတွေဆီ သွားကြရအောင်နော်…
ဘာမှမပြောရသေးခင် ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ တောင်းပန်စရာရှိတယ်.. ဘာလဲဆိုတော့ ဒီလို အညွှန်းတွေ ရေးရတာ တကယ်တော့ စိတ်မလုံဘူးရယ်… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြင်းထိန်းငတာလို ခံစားရတာတော့ အမှန်ပဲ 😀 😀 ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်အရမ်းကြိုက်ခဲ့၊ သဘောကျ မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ အရာတွေကို အခြားသူတွေလည်း ခံစားစေလိုတာလေးကလည်း တစ်ကြောင်း၊ ဒါတွေရေးနေရင်း ကျွန်တော်လည်း စာတွေပြန်ဖတ်ဖြစ်လာတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ရေးဖြစ်နေရတာပါ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အရေးအသားလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် ဆရာတွေကို စော်ကားမိသလို ဖြစ်သွားရင်လည်း ဒီကနေပဲ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျ.. ဒီမြင်းထိန်းငတာလေးကို တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့… 😉
(ရုပ်ရှင်)အတွက်ကို ကျွန်တော်က Police Academy ကို ရွေးထားပါတယ်။ အတော်ကြာနေတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုပေမဲ့လို့ အဟောင်းထဲက အကောင်းလေးပေါ့ဗျာ…. ရဲဝန်ထမ်းတွေ တက်တဲ့ ကျောင်းကြီးထဲက အလွဲပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ရိုက်ပြထားတာက အတောမသတ် ရယ်မောရစေမှာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ကြည့်စေချင်တယ်ဗျ.. မြန်မာစာတန်းထိုးတော့ အတော်ရှာရမယ်ထင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးတော့ ရှိလောက်သေးတယ်…
တကယ်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၇ ကားရှိတယ်ဗျ.. နည်းနည်းနောနော အရှိန်အဝါတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်… ၇ ကားလုံးကလည်း ပါးစပ်မစေ့ရအောင်ကို ခွီနေရတာမျိုး… အောက်လုံးတွေလည်း မပါပါဘူးနော် :3 အတင်းကလိထိုးထားတယ်လို့တော့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အပြင်မှာ ဒီလောက်တလွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေ ရှိဖို့ဆိုတာ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာကိုး… ဒါပေမဲ့လို့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပညာနဲ့ စကားလုံးတွေက ပြောင်မြောက်ပြီး သဘာဝကျနေတဲ့အခါမှာ အတင်းအကြပ်လုပ်ယူသလို မဖြစ်တော့ဘဲ အားရပါးရကို ရယ်ချင်စရာ ကောင်းနေတော့တာပါပဲ… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောဖို့ကျပြန်တော့လည်း လွဲတာတွေချည်းဆိုတော့ ဘယ်က စပြောရမှန်းမသိလေနော်…ဒီဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဆရာတပည့်တွေကြားက သံယောဇဉ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေ ကြားက သံယောဇဉ်တွေကိုလည်း ချစ်စရာတွေ့ရဦးမှာပါ။ ကဲ.. ဘာကြည့်နေတာလဲ… ခုပဲ ရှာကြည့်တော့လေ.. :3
(စာအုပ်)ကိုတော့ ကျွန်တော်က ဆရာဇဝန ရဲ့ “ကောလိပ်ကျောင်းသား” ကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်.. ဒီစာအုပ်ကို မဖတ်ခင်မှာ သတိထားစရာက မကြာသေးခင်ကမှ ရုံတင်သွားတဲ့ “ကောလိပ်ဂျပိုး” ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖူးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကို လုံးဝ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ လိုပါတယ်နော်… ပြီးတော့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ တက္ကသိုလ်အခြေအနေတွေ အားလုံး မေ့ပစ်လိုက်ပြီး ဝတ္ထုထဲက ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝကို အပြည့်အဝ စီးမျောခံစားကြည့်လိုက်ပါ… ပေးရတဲ့ အချိန်နဲ့ ပြန်ရလိုက်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းရသနဲ့ တကယ်ကို ထိုက်တန်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
စကားတွေ နည်းနည်းများ ကြီးသွားလားမသိ 😀 ဆရာဇဝနကိုယ်တိုင် ဝန်ခံခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ စကားအတိအကျတော့ ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ… အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဒီလို.. “စာရေးသက် အတော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက် ကောလိပ်ကျောင်းသားလိုမျိုး နောက်ထပ်ဝတ္ထုတစ်အုပ် ထပ်ရေးမယ်ဆိုရင် ဒီလောက် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ… အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါက ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝ၊ ဂျပိုးထိုးနည်း အဖုံဖုံ၊ ချောက်ချနည်း မျိုးစုံ နဲ့ အဆောင်နေကျောင်းသားတို့ရဲ့ အခက်အခဲပေါင်းစုံ၊ ပိုးနည်းပန်းနည်း အစုံစုံနဲ့ ကာယ၊ဉာဏ နဲ့ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေကို အားပေးခဲ့တဲ့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝဟာ ကျွန်တော်တို့ခေတ်နဲ့တော့ အကွာကြီးလို့ ဆိုရမှာပါ…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝတ္ထုတစ်အုပ်ထဲ ပျော်ဝင်နစ်မျောရင်း သမိုင်းထဲက ကောလိပ်ကျောင်းတော်ကြီးကို အရယ်တစ်ဝက်စွက်လို့ ပြန်သွားလည်ခွင့်ရလည်း နည်းလားနော်…
(သီချင်း)ကတော့ အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ့် တေးရေး တေးဆို အရိုး ရဲ့ “ဥ” ပေါ့နော် :3 “ဥ” လို့တစ်လုံးတည်းနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဒီသီချင်းရဲ့ ပေါက်မြောက်မှုဟာလည်း လက်ကုန်ပါပဲ.. သီချင်းကို မူတည်လို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လည်း အကယ်ဒမီတွေရခဲ့ကြပါသေးတယ်.. သဘာဝဆန်ဆန် ကျေးလက်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းတို့ရဲ့ သဘာဝ၊ ကိုယ့်ဥမှ ရွှေဥထင်တတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ သဘာဝကိုလည်း သီချင်းထဲမှာ ပါးပါးလေးထည့်ပုတ်ထားပါသေးတယ်..
သီချင်းအစ ကြက်နှစ်ကောင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းက လို့ ဆိုရမလား 😀 သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းသက်သေ ဒီဥလေးတစ်ဥကြောင့် တစ်ရွာလုံး ဝုန်းဒိုင်းတွေကြဲကုန်တာ ဆိုတာလေ… သီချင်းနားထောင်လေ.. ရယ်ရလေပါပဲ… “လူလည်အာရှသား” ခွေ စထွက်တုန်းက ကျွန်တော် အဲဒီသီချင်းကို ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး နားထဲစွဲလို့ နားထောင်မိတာ.. အဓိပ္ပာယ်လည်း သေချာ မစဉ်းစားမိပါဘူး.. အကျင့်ပါပြီး သံစဉ်လေးပဲ နားထောင်နေမိရင်း နားထဲစွဲနေတာ နောက်ပိုင်း စာသားတွေပါ သေချာ လိုက်နားထောင်တော့မှလေ.. အမလေး.. ရယ်လိုက်ရတာ အူတွေကို နာပါရောလား… အများကြီးလည်း မပြောလိုပါဘူးလေ… အကုန်လုံးနီးနီး သိထားကြပြီးသား ဖြစ်မှာကိုး… ရေးရင်း သီချင်းပြန်နားထောင်ချင်လာလို့ သွားနားထောင်လိုက်ဦးမယ်… နောက်များမှ ပြန်ဆုံကြပါစို့ရဲ့…။
Previous Previous post: လူငယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးမှုလက်ရာ
Next Next post: ကြက်သွန်မြိတ်တွေ ကြာရှည်အထားခံစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းနှစ်သွယ်
Published: April 19, 20182:50 am Updated: May 14, 20192:35 pm
Lee Jong Suk နှင့် Suzy တို့နှစ်ဦးသားလိုက်ဖက်ညီမှုက “While you weresleeping” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သာမက အပြင်လက်တွေ့မှာလည်း ထင်ဟပ်လို့နေပါတယ်။ Post Views: 2,216